Qaylo-dhaantu waxay ku garaacdaa horumarinta isgaarsiinta - Tababbarka Garashada
Waa maxay xaaladaha ay ku habboon tahay in lala xiriiro takhasusle? Halkan waxaa ku yaal tilmaamayaal loo qaybiyay da 'kooxeed:
Bilaha 6 Ma qoslo mana qayliyo; uma fiiriso jihada dhawaqyada cusub
Bilaha 9 Maya ama hadal xaddidan; muu muujin farxad ama xanaaq
Bilaha 12 Ma tilmaamayso walxaha; ma sameeyo astaamo sida madaxiisa oo la ruxo
Bilaha 15 Weli ma uusan oran ereygii ugu horeeyey; uma jawaabo "maya" ama "hello"
Bilaha 18 Uma isticmaalo ugu yaraan 6-10 erey si is daba joog ah; si fiican uma maqlo ama ma takooro dhawaaqyada
Bilaha 20 Ma haysto tiro ugu yaraan lix shibbane; ma fuliso tilmaamo fudud
Bilaha 24 Waxay leedahay eray bixin ka yar 50 eray; dan kama lihi isdhexgalka bulshada
Bilaha 36 Shisheeyayaashu waxay halgan ugu jiraan sidii ay u fahmi lahaayeen wuxuu leeyahay; ma isticmaalo weedho fudud
Xaaladaha kale ee lagu ilaalinayo kormeerka:
xulashada cuntada (cun ​​kaliya 4-5 cunno)
candhuufta oo badata
xayiraadda in ka badan lix bilood.
Dawanno qaylodhaan, afka, dhibaatooyinka wada xiriirka, dhibaatooyinka hadalka, horumarinta aan sugnayn
Qaylo-dhaantu waxay ku garaacdaa horumarinta isgaarsiinta2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/red-35853_1280.png200px200px
Cilladaha macnaha ee dadka waaweyn: aragti iyo jimicsi lacag la’aan ahAphasia, Luqad
Horumarinta fikradaha carruurtaafka